Fifidianana Zimbaboe 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2019 4:19 GMT
Nandatsa-bato ny Zimbaboenana tamin'ny 29 martsa 2008 hifidy ny filoham-pirenena sy ireo handrafitra ny parlemanta. Andro vitsy taty aoriana, mbola tsy nambara ny vokatra ofisialy. Nanambara ny fandreseny i Morgan Tsvangirai lehiben'ny mpanohitra MDF, manoloana ireo mpifaninana aminy toa an'i Simba Makoni sy ny mpitondra Robert Mugabe tamin'izany fotoana izany avy ao amin'ny Zanu (PF), saingy mety tsy hiova tanana tsy misy fifandonana ny fahefana.
Ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, Solidarity Peace Trust (voasoratra ao Afrika Atsimo), no nizara ity horonantsary momba ny herisetra mahatsiravina nataon'ny tafi-panjakana ZANU PF Zimbabwe hatramin'ny nisian'ny fifidianana tamin'ny Martsa 2008 ity. (avy amin'ny mpiblaogy Cry Beloved Zimbabwe)
Manana Fantsina YouTube ny vondrona Zimbabweana pro-demaokrasia Sokwanele ary manana ity fanentanana an-dahatsary ity:
Mety ho hita ao amin'ny fahana Flickr avy amin'ny vondrona Sokwanele pro-demaokrasia ny sarin'ny fihetsiketseham-panoherana ampolony sy sarin'ny fiainana andavanandro ihany koa. Misy ihany koa ireo sasany mampihoron-koditra sy manohina fampijaliana ireo niharany.
Koa satria moa nandeha nandatsabato ny Zimbabweana tamin'ny 29 marsa 2008, nisy ekipam-paka sary avy amin'ny tranonkala Ngizwane-Ndinzwei nandrakitra ny zava-nitranga raha mbola tsy tapitra izany.
Hajian-tsary amin'ny tampon'ity pejy ity avy amin'ny mpisera Flickr frontlineblogger.